Baandiraa Habashaa, Toophiyaa fi Garbummaa Uummata Oromoo – Oromedia
Home » Xiinxala » Baandiraa Habashaa, Toophiyaa fi Garbummaa Uummata Oromoo
Gabaabumatti:- Habashoonni alaabaa isaaniitiin “Baandiraa” jedhu. Darbanii darbanii “Sedeq Alamas(?)” ni jedhu. Maqaan baandiraa jedhu kun Afaan Laatiiniiti. Attamitti Habashaan afaan halagaa kana “baandiraa” kan ofii godhatee dhimma itti bahuu calqabe?
Hammas gabaabumatti:- Bardhibbee 16ffaa keessa innaa Portugaalonni nama “Grany Ahmed” jedhumu loluuf gargaarsa Habashaaf gara Gondar dhufan sana, maqaan kun isaan wajjin dhufee Habashaa biratti baramee jedhama. Achumaan masaraa Gondar sanas ijaaranii deeman.Habashoonni garuu masaraa kana “nutu ijaaree” jedhu.
Halluu Baandiraa Habashaa: Magarisuu(Arenguwadee), Keelloo(Bicaa) fi Diimaa(Qayyi) dha. Halluwwan kun, seenaa mana bataskaana isaanii wajjin hedduu waliitti hidhamee jira. Suuraan, huccuun fi akkasumas daatuun bataskaana Habashaa marti, halluwwan kanaan caalaatti kuulamanii hojjetamu.Taabonni Habashaa innaa bahuu fi galu, huccuun (baandiraan) halluu kanaan kuulame, Taabota isaanii sana irra qabamee gadi baha, laga bu’a, lagaa debi’ee gala. Innaa balbala bataskaanaa ol-seenee galu, hoolu itti qalama. Qeessiin Taabota sana baatu, dhiiga hoolaa kana irraa trkaanfatee gala. Kana waanan ija kiyyaan argaa ture.
Seenaan Nugusoota Habashaas seenaa bataskaana isaanii wajjin addaan waan hin baaneef, nugusoonni isaaniis baandiraadhuma kana irratti asxaa garaa garaa uumanii dhimma itti bahaa turan. Har’a dha illee kanuma irra jiru. Bara Axee Minilik
Yeroo duraaf, bara 1890 keessa huccuun bifa sadiin kuulame, “Ye Itiyophiya Bandira” jedhamee dhaabatee waamamuu calqabe. Yeroo sanatti gararraan isaa diimaa ture. Haa ta’u malee, sana dura seeraan tumamee waan dhiyaate hin turre. Uummata Habashaa birattuu waan beekamu hin turre.
Eegga “Ye Adwaa Xoorinneetti” jedhamu irratti, niitiin Axee Minilikiin, Etegee Taayituu Buxul kan jedhamtu, dhirsa ishii dirqisiiftee Xaaliyaanota irratti duulchiftee mootee galtee booda, akkaataan taa’umsa halluu baandiraa Habashaa kanaa jijjiirame. Haluun diimaa jalatti gadi bu’e.Magariisuun gararraatti ol-bahe. Keelloon walkkaatti hafe diiimaan jalatti gadi bu’e.
Bal’inaaf PDF kana banadha! Baandiraa Habashaa
Previous: Ibsa ejjannoo: Obsaa fi cichomina dhaabni keenya ABO agarsiiseefis jaalalaa fi kabajaa guddaa qabna
Next: “Araarichi Araara haqaa miti. Jaarsolii jedhanii adeemaa jiran dubbisuun hindandaa’amu waraanan ajjabamanii waan deemaniif” jaal Marroo